> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: 2009
၁၂၊ ၁၂၊ ၂၀၀၉။
Posted by Thi Ha Thu at 6:32 PM
ငြိမ်သက်ခြင်းမှာ ဂီတသံ/ရေစီးသံဟာ တိုးတိုးညင်းညင်း
တစ်ကောင်၊ နှစ်ကောင်၊ သုံးကောင်...
ရေစီးအတိုင်း နည်းလမ်းတကျ ဆက်လက် ရွေ့လျားကြပါစို့...
၁၀၊ ၁၂၊ ၂၀၀၉။
Posted by Thi Ha Thu at 6:30 PM
စကြဝဠာတစ်ခု ပျက်စီးသွားခဲ့လေသည်။ ။
Posted by Thi Ha Thu at 6:24 PM
၁၈၊ ၁၁၊ ၂၀၀၉။
နွယ်စိမ်းဝေ၏ (နွယ်နီ၊ ဇန်နဝါရီ၊ ၀၈ ပါ) ပါပီလွန် ကို မှီးသည်။
Posted by Thi Ha Thu at 12:52 AM
လင်းသဏ်ညီ - ။
အောင်ပိုင်စိုး - ။
ဧဇံ - ။
စိုင်းဝင်းမြင့် - ။
မောင်ဖီလာ - ။
ငုအိမ်ထက်မြက် - ။
ထွန်းဝေမြင့် - ။
ဝိုင်ချို - ။
အောင်ရင်ငြိမ်း - ။
မိုးဝေး - ။
လူဆန်း - ။
မင်းထက်မောင် - ။
မောင်စိမ်းနီ - ။
ဝင်းမောင် - ။
ဥတ္တရာအောင် - ။
ကေမျိုးငြိမ်း - ။
ခိုင်မြဲကျော်စွာ - ။
အေမွန် - ။
ဝင်းသူရ - ။
မောင်လင်းယုန်(ရှမ်းပြည်) - ။
ကောက်နွယ်ကနောင် - ။
ဝင်းမြင့် - ။
ငြိဏ်းဝေ - ။
ကိုဘုန်း - ။
လွန်းဆက်နိုးမြတ် - ။
နီမျိုးထက် - ။
ခရမ်းပြာထက်လူ - ။
တိုးနှောင်မိုး - ။
မောင်လင်းရိပ် - ။
သျှီသူအောင် - ။
စိုးမင်းအောင် - ။
မောင်ဒေး - ။
တီကျူး - ။
ချမ်းမင်းအိမ် - ။
သစ္စာပိုင်စိုး - ။
ပြေမြင့် - ။
ဘုန်းနေသွန်း - ။
ကြည်ဇော်အေး - ။
မောင်သင်းခိုင် - ။
စန်းဦး - ။
လူအိမ် - ။
နိုင်မွန်အောင်သွင် - ။
နေမျိုး - ။
အောင်ချိမ့် - ။
ဇေယျာလင်း - ။
ပတ်သက်သမျှ - ရေးသား၊ ပြောဆို၊ ဆွေးနွေး၊ သုတေသနပြု၊
ပိုင် - ။
Posted by Thi Ha Thu at 10:47 PM
ဘဝကို တစ်ရက်ချင်း နေထိုင်
မီးပြတိုက်က အလင်းရောင် ပျောက်မသွားခင်
တက်ကိုလှော်ရင်း . . .
၂၄၊ ၀၉၊ ၂၀၀၉။
Posted by Thi Ha Thu at 7:10 PM
ကဲ။ နေမွန်းတည့်ပြီ၊ အပူရှိန်အလွန်ပြင်းသည်၊
မစည်ကားအပ်တဲ့ နေရာတွေမှာ စည်ကားပြီ၊
ယန္တရားတွေ လည်ပတ်ပြီ၊ မုန်တိုင်းတွေတိုက်ပြီ၊ ငလျင်တွေ လှုပ်ပြီ။ မနေ့က
ဟော အခု ဟုတ်သွားပြန်ပြီတဲ့။
မီဒီယာပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်မှ ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။
(လက်ညိုးနဲ့ လက်မဝိုင်းပြပြီး) ‘ဒါ အရေးကြီးတယ်’တဲ့ ‘မင်းရောဘယ်လိုလဲ’တဲ့
ထမင်းဝတော့ တီဗွီလေးဘာလေး ကြည့်ပေါ့
မော်ဒယ်ဖက်ရှင်လိုင်း ရောက်လို့ ရောက်သွားမှန်း မသိ သတိဝင်လာတော့
ငါ့အတွက် ဒါ အရေးကြီးတာပဲ
ကဲ၊ ကဲ ကဲ
စားဖွယ်ဆိုင်တွေလည်း လင်းပြီ၊ ညမှ ဖွင့်တဲ့ ဆိုင်တွေလည်း ဖွင့်ပြီ မီးရောင်မှာ
ပိုးကောင်တွေ ယောက်ယက်ခပ် နေပြီ
နောက်မှ ခံစား၊ နောက်မှ စဉ်းစား
‘ဘယ်လိုလဲ ခေါ်မှာလား မြန်မြန်’ တဲ့
၂၀၀၉၊ ဇွန်၊ နှစ်ကာလများ။
Posted by Thi Ha Thu at 12:58 PM
တကယ်တော့ ချာလီချက်ပလင်နဲ့ မပြီးဘူး
ဒီဘဝဟာ အဆုံးရှိတာတော့ သေချာပြီ၊
တစ်နာရီမိုင် ၁၂၀ နဲ့ ငါတို့ဆီသေချာနေပြီဖြစ်ကြောင်း အထူးသတင်း
Posted by Thi Ha Thu at 12:56 PM
သူ့ထက် ပိုရယ်စရာကောင်းလည်း သူ့လောက်
အခန်းထဲမှာ အံဆွဲတွေအားလုံး ဖွင့်လျက်တန်းလန်း
အခန်းရှင်းရင် ပင့်ကူတွေ ထွက်လာမယ့်အခန်း
အပိုင်း ၂၃ အခန်းဆက် စုံထောက်ဇာတ်လမ်းတွဲ
အဲဒီ တီဗွီဖန်သားပြင်ကြီး ဖွင့်လျက်တန်းလန်း
သူ အိပ်မောကျသွားပြန်ရော ။ ။
စတိုင်သစ်၊ ၂၀၀၄ မေ
၂၀၀၇၊ ဖေဖော်ဝါရီ၊ နှစ်ကာလများ။
Posted by Thi Ha Thu at 12:52 PM
ပထဝီအနေအထား၊ ၂၀၀၉၊ ဇွန်လ၊ ပထမအကြိမ်။
Posted by Thi Ha Thu at 12:55 PM
ပန်ကြားချက် / ပြန်ကြားချက်
လူတိုင်းသိပြီးသား ကိစ္စတွေ မပြောတော့ပါဘူး
ဘယ်သူမှ မသိသေးတာတွေလည်း ပြောမနေတော့ပါဘူး
Posted by Thi Ha Thu at 12:54 PM
ပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စား သင်တန်းများဆီ အလုအယက်
အမှုဆိုတာ ဆွေးတယ်မရှိဆိုတော့ ထပ်ဆွေးပေါ့
ဆွေးနေတဲ့ သီချင်းများကို နားထောင်ရင်း
ဆွေးနေတဲ့ ကြမ်းများကို နင်းကြရင်း
ဆွေးနေတဲ့ ဓားများကိုသွေးကြရင်း။ ။
Posted by Thi Ha Thu at 12:53 PM
ခုခင်ဗျားတို့ ရောက်ရှိနေတဲ့အရွယ်။ ။
Posted by Thi Ha Thu at 12:50 PM
သေချင်တဲ့ လူကတစ်ယောက်။ ။
ပန်းအလင်္ကာမဂ္ဂဇင်း၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၀၆။
Posted by Thi Ha Thu at 12:45 PM
ဖက်ရှင်မဂ္ဂဇင်း၊ မတ်၊ ၂၀၀၆။
Posted by Thi Ha Thu at 12:44 PM
ဟန်သစ်မဂ္ဂဇင်း၊ ဇန်နဝါရီ၊ ၂၀၀၅။
Posted by Thi Ha Thu at 12:41 PM
အရက်တစ်ခွက်လောက်တောင် အရသာမရှိတဲ့အရာတွေကတော့ အများကြီးပါပဲ
ဟိုခွက်ထဲမှာလည်း ဒီခွက်ထဲကလို မကောင်းတာတွေအများကြီးပါပဲ
စိတ်ညစ်လို့ သပွတ်အူဘေးသွားထိုင်တော့ မြစ်ကမ်းပါးကြီးကပေါလောမျောလာ
မစင်တာတွေရော စင်တာတွေရော ခုတစ်လော ဖတ်ဖတ်နေရတယ်မို့လား
ဒီပုလင်းထဲမှာလည်း ဟိုပုလင်းထဲကလို အဆင်မပြေတာတွေ အများကြီးပဲ
မဖြစ်ထွန်းတဲ့ ညစ်တွန်းတွေနဲ့လည်း တွေ့ရတွေးရ
ငါပြောသမျှ အမှန်ဝါဒတွေနဲ့လည်း တွေ့ရတွေးရ
ခါဇန်ဘူတာရုံတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပုံကိုကား ပြောပင်မပြောချင်တော့ပါ
ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ပလိပ်ရောဂါသည် ပလိပ်ရောဂါသာဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်သည် ပလိပ်ရောဂါကို ဘာစီလိုနာတွင် မြင်ခဲ့ဖူးပါပြီ။ ပါရမီတွင် မြင်ခဲ့ဖူးပါပြီ။
ထိုစဉ်ကမူ ကျွန်တော့စိတ်သည် စာပေမှာထက် တခြားသို့ရောက်ရောက်နေပါသည်။
အခြားမဟုတ်ပါ။ ပျောက်သွားသော မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဓားဆီသို့သာ စိတ်ရောက်နေပါသည်။
ရယ်စရာမဂ္ဂဇင်း၊ အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၀၉။
Posted by Thi Ha Thu at 7:58 PM
Posted by Thi Ha Thu at 7:57 PM
Posted by Thi Ha Thu at 7:55 PM
ဇာတ်လမ်းက ဒီမှာတင် ရပ်သွားတာမှ မဟုတ်ဘဲ။
ပိတောက်ပွင့်သစ်၊ အမှတ် (၂၅)၊ ဇူလိုင်၊ ၂၀၀၉။
Posted by Thi Ha Thu at 5:11 PM
ပုံပြင်တွေထဲမှာသာ ရှိတာ မဟုတ်ပါဘူးကွယ်။
ရုပ်ရှင်တေးကဗျာ၊ အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၀၉။
Posted by Thi Ha Thu at 5:09 PM
ချိုချဉ်ဖန်ခါး ဘာလဲ တွေးမနေတော့ဘူး
ဥတုသုံးပါးလုံး တစက်စက် စိမ့်ယိုခဲ့တယ်
ငါ့ခမျာ ရယ်ကျဲကျဲ…။ ။
မဟေသီ၊ စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၀၉
Posted by Thi Ha Thu at 5:04 PM
မဟေသီ၊ သြဂုတ်၊ ၂၀၀၉
Posted by Thi Ha Thu at 5:01 PM
Posted by Thi Ha Thu at 4:55 PM
ခါတစ်ရံ မိုးရွာစေသတည်း။ ။
မိုးဝေ၊ ၁၉၇၈၊ သြဂုတ်။
ပကြိမ်၊ ၂၀၀၄၊ အောက်တိုဘာ။ နှစ်ကာလများ။
ငါ စက်ရုံက ထုတ်လုပ်လိုက်သမျှဟာ
ဟာသပြဇာတ်လို ထိုင်ဟားလို ဟား
ရိုင်းစိုင်းမှုက များသထက် များ
မှားယွင်းမှုက ပွားသထက် ပွား
အမှန်တရားက ဝေးသထက် ဝေး
ချိုင်းကြားမှာ ရေမွှေးတွေ ဖျန်းပက်
မျက်ခွက်ကို မျက်နှာချေတွေနဲ့ ဖို့
ရက်ဘတ်ကို ဂျက်ကက်ဇစ်တစ်ခုလို ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆွဲဖွင့်
ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းက ပြုတ်ကျလာတဲ့ ခေါင်းခွံ
ဒီမှာ ဦးနှောက် ဟက်တက်ကြီးကွဲလို့တဲ့
အဲဒီ မျက်နှာဖုံးတပ်ထားတဲ့ မျက်နှာဖုံးအောက်မှာ
ငါသောက်တဲ့ ဝိုင်က ခါးလှချည့်
ငါ့လက်ကို ပြန်ကိုက်တဲ့အကြောင်း မှတ်ထားဖို့ရာ
ကောင်းကင်ယံမှာ ဝိညာဉ်ချင်း စီးချင်းထိုးဖို့
သဲလို ပြိုပျက်ရမယ် ငါသိ
ဒါကြောင့် ငါ့မှာ ဒိုင်ယာရီမရှိ။
(အငမ်းမရ) သွေးကြောထဲထိ လောင်းချ
ငါ့ကို ဝိုင်ချိုလို သောက်လိုက်ကြ
(မင်းတို့ မသိကြသေးဘူး မဟုတ်လား)
တကယ်တော့ ငါဟာ အက်ဆစ်ပြင်းတစ်ခွက်သာ ဖြစ်တယ်။
အနုပညာလို့ခေါ်တဲ့ ရေနဲ့ နာမည်ရေးကြ
နိုးထလို့မရတဲ့ ဘဝဆိုတဲ့ အိပ်မက်ဆိုးကို မက်ကြ
ကိုယ့်အတ္တကို ကိုယ် အရူးအမူး စွဲလမ်းတပ်မက်ကြ
ဟုတ်ယောင်မှု တံလျှပ်တွေ ဖျတ်ခနဲလွင့်ပါးကြ
တစ်ချိန်က ကျောခိုင်းခဲ့တဲ့ လမ်းတလျှောက်
ဘဝကို ဆစ်ပိုင်းစီစဉ်စေခိုင်းလို့ ရမယ်များ
ဒါဟာ ငါ့ဘဝရဲ့ ဒစ်ဖရင်ရှယ်တစ်ခုပဲ
ဒါကို ဘယ်လိုသုခုမနဲ့ အင်တီဂရိတ်လုပ်ရပါ့
အဦးအစ၌ ရူးသွပ်ခြင်းအား ဖန်ဆင်း၏။
ရှင်သန်လိုမှုကို (ပိုလို့မိုက်မဲစွာ) ရူး
အန္ဓကို မူးယစ်ထုံထိုင်း ရူးသွပ်စေတာ။
အတ္တအတွင်းသားမှာ အိမ်ဖွဲ့လို့ လှိုက်စား
၃၇ကမ္ဘာလို့ ထင်ရလေတဲ့ ၃၇နှစ်တာ
အဲဒီလို စာတန်ဟာ ဘယ်နှကိုယ်ခွဲပြီး
ဟန်ဆောင်မှုမှာ ငါ့ခန္ဓာက လေးလံ
ကောက်ကျစ်မှုမှာ ငါ့မော်တာက နှေးကွေး
ကြေကွဲ (အသံမဲ့)စွာ အော်ဟစ်မိ
ငါ့ကို ဝိမုတ္တိသို့ သယ်ဆောင်ပို့ပါကွဲ့
အို… တစ်ကိုယ်စာလမ်းကျဉ်းငဲ့။ ။
ဟန်သစ်၊ ၁၉၉၁၊ ဇူလိုင်။
၂၀၀၇၊ ဧပြီ၊ ပကြိမ်။
အိမ်ထောင်ကို လက်တွေ့မှာ မိန်းမထဘီနားဦးစီးရသလား
မူးယစ်သောက်စားရခြင်းအကြောင်း ခေါင်းစဉ်ရှာ အလွယ်ကလေးရှိ
ပြီးရင် မိဘမေတ္တာကို အထူးသိတတ်လာမယ်
အဲ ဒါပေမယ့် ပျင်းတောင်ပျင်းသေးတယ်
လေနေတယ် နားထားတယ် ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်
Posted by Thi Ha Thu at 9:23 PM
ကိုယ်ကြည်နူးမိတယ်၊ ဒင်းကလေး ဆိုတဲ့နေရာမှာ
ဖြူဖြူချောချော ငယ်ငယ်လှလှလေးပဲပေါ့၊ သဘောထားချင်းက
နောက်မှ တိုက်ဆိုင်၊ အကျင့်စာရိတ္တလေးက နောက်မှ ကောင်းမွန်
ကိုယ်တို့ ပြောနေသမျှ ပြုနေသမျှ၊ ဆိုင်ကယ်ကို
အိပ်ဇောဖြုတ်မောင်းခဲ့သမျှ၊ ဘုရားလူကြီးလုပ် ရှေ့ဆုံးက ဝတ်ဖြူ
ကိုယ် ရုပ်ကြမ်းကြီးနဲ့ နွဲ့ခဲ့ပြီ
ကိုယ် လျှာရိုး မဲ့ခဲ့ပြီ
ကိုယ် ဒိုင်ယာလော့တွေ လွှတ်ကောင်းခဲ့ပြီ
ကိုယ့် ယောက်ျားမာယာ ဘယ်နှဖြာမှန်းတောင် မသိတော့ပြီ
ကိုယ် ရယ်စရာထဲက ရယ်စရာတွေပြော၊ ပုံတွေအများကြီးပြော
ဂျာနယ်ထဲက အတင်းအဖျင်းသတင်းတွေ ဖောက်သည်ပြန်ချ
ကိုယ် ခေါင်းလိမ်းဆီအပီလူး၊ မှန်ရှေ့က ခွာမရဖြစ်
အင်္ကျီတွေ တစ်ထည်ပြီးတစ်ထည်၊ အမွှေးနံသာတွေ ဆွတ်ဖြန်း
ကိုယ့် ဝမ်းနာနေတာတောင် ကိုယ်မေ့
ဝရော လုံးကြီးတင်ရောခဏငှားပြီး ဝိ
Posted by Thi Ha Thu at 9:18 PM
ဒါနဲ့ ဒီအလွမ်းဓာတ်ကလေးက ဘယ်မှာလာခံ ခံလာနေတာလဲ
‘အက်စ်အိပ်ခ်ျအိုင်ပီ’ကို သင်္ဘောမဟုတ်လား ဘာကုန်တင်/ချရင်
ကောင်းမလဲ သင်စဉ်းစားနေစဉ်မှာ သင်ရထားဥသြသံလေးများ
(အသည်း)(ရင်ဘတ်)နှလုံး(သား)မှာ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များတာလည်း ပါပါတယ်
ဆေးလိပ် အရက်အလွန်အကျွံသောက်လို့လည်း ဖြစ်နိုင်သလို
မျိုးရိုးလိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်သလို Boss ဘောလ်ပင်နဲ့တွေ့ပြီး
ရေးခဲ့တယ်၊ ရေးနေတယ် ဆိုပါတော့
Posted by Thi Ha Thu at 9:17 PM
မင်းဆီကိုရည်ရွယ်ပြီး စာတွေအကြိမ်ကြိမ် ငါရေးတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်စောင်မှမပို့ဖြစ်ဘူး။ မပို့ဖြစ်ဘူးဆိုတာက အချို့စာတွေက ရေးပြီးမှ ငါ့အနေနဲ့ သိပ်အရေးမပါဘူး ထင်လို့။ ဥပမာ သာကြောင်းမာကြောင်း သတိရကြောင်း အဲဒီလိုဟာမျိုးတွေ၊ မင်းနဲ့ငါကြား ထူးခြားတဲ့ ဆက်သွယ်မှု ဖြစ်မလာလောက်ဘူးထင်လို့။ ဒါပေမယ့် ဒီလောက်နဲ့တော့ မင်းဆီကိုစာရေးဖို့စိတ်ကူးက ပျောက်မသွားပါဘူး။ ထပ်များရေးမိပြန်တော့လည်း ငါရေးချင်တာကတစ်မျိုး၊ ငါရေးမိသွားတာကတစ်မျိုး၊ ငါရေးတဲ့ဘာသာစကားက ငါဖြစ်နေတာတွေကို ကိုယ်စားမပြုနိုင်ဘူး။ ဟုတ်တယ် အဲဒီဘာသာစကားက ဘယ်တော့မှလည်း ကိုယ်စားပြုနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ တော်ကြာ ငါပြောချင်တာကတစ်မျိုး မင်းအနေနဲ့ တစ်မျိုးမြင်သွားမှာလည်း စိုးရတယ်။ ငါဖြစ်နေတယ်၊ ငါကြုံနေရတယ် ဆိုတာတေကလည်း တစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန် တစ်ကြိမ်နဲ့တစ်ကြိမ် တူတာမဟုတ်ဘူး။ ဘယ်ဟာကို ဦးစားပေး ရေးရမှန်းလည်း ငါမသိဘူး။ စာဆုံးခါနီးမှ ဆုံးသွားပြီးမှ ငါပြောချင်တာတွေ ထပ်ထပ်ပေါ်လာပြီး အဆုံးသတ်မရ ဖြစ်နေတာမျိုးလည်း ရှိတယ်။ ရေးထားသမျှအထဲက ဘယ်စာကို ဦးစားပေး ပို့ရမှန်း မသိ ဖြစ်ရတာမျိုးလည်းရှိတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ငါဘာစာမှ မင်းဆီမပို့ဖြစ်တာပါ။ မင်းဆီပို့လိုက်တယ်ပဲ ထားဦး။ ငါ့စာတွေ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရောက်ချင်မှရောက်မှာ။ ငါနောက်ဆုံး ရ,ထားတဲ့ မင်းလိပ်စာမှာ မင်းရှိချင်မှရှိမှာ။ မင်းမှာ လိပ်စာအပြောင်းအလဲရှိမရှိလည်း ငါမှမသိရတာ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ အဲဒါတော့ ငါရေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by Thi Ha Thu at 9:16 PM
ရေးတော့ မြိတ်၊ ဖတ်တော့ဘိတ်။ ဘိတ်??? ဘိတ်ဆုံးမှာနေတာလား
တစ္ဆေခြောက်သောအိမ်ကြီးနဲ့ မြို့ရဲ့လသာဆောင်မှာ ဆင်မြူရယ်ဝှိုက်ဖ်ရဲ့
ဖြူဖြူသဏ္ဌာန်အရိပ်တွေ၊ အချို့နိုင်ငံခြားသားတွေမြေပုံထဲမှာ ပြန့်
ဘိတ်သားတချို့တောင်မသိတဲ့ ‘မာဂွီး’လို့ ရေးထားတယ်
ထင်ရှားသော အလောင်းမင်းတရားအမာရွတ်နဲ့ တောင်တန်းတွေ
ရေမြေကလည်း နည်းနည်းစိမ်းနေသေးတယ်၊ ဘာသာစကားတဝဲဝဲ
ကော့သောင်းနဲ့ထားဝယ်ဆိုတာ ဒီနားလေးတင်ပါဗျာ၊ ရှပ်ပြေးအမြန်ယာဉ်က
ပြောတယ် ရထားဆိုတာ အလုံးလားအပြားလား
မြိတ်လေ/လှေဆိပ်(ဟေ့ ဘိတ်သား လေလားလှေလား)မှာ
ဆယ်သက်စားမကုန်တဲ့ ပင်လယ်ကြီးက ရွှေသီးသလို
သမုဒ္ဒရာထဲက တစ်ထွာပြီးတစ်ထွာအဖဲ့ခံ/အဖမ်းခံရတဲ့ ရှားပါးပင်လယ်တွေ
ယိုးဒယားပါကင်လိုက်၊ တရုတ်ကွန်တိန်နာ၊ ဂျပန်အစီးတစ်ရာ
ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောကြီးတွေနဲ့ အိမ်တိုင်ယာရောက် ပို့ဆောင်ပေးနေပါပြီ
ကိုကာကိုလာ၊ ဟမ်ဘာကာ၊ ဟော့ဒေါ့၊ ဆင်းဒဝစ်နဲ့ မြိတ်ကတ်ကြေးကိုက်
ယိုးဒယားကွေးတရုတ်၊ ကုလားဒန်ပေါက်၊ ရှမ်းခေါက်ဆွဲ၊ ချစ်တီးထမင်းနဲ့
တရုတ်ဟော့ပ်ပေါ့၊ ထားဝယ်မုန့်လက်ဆောင်း၊ ရခိုင်မုန့်တီ၊ ရန်ကုန်မုန့်ဟင်းခါး
ဟင်းစားရှာဖို့တဲ့ ဘယ်ရပ်ကွက်က ကျူးကျော်လာမှန်း မသိတဲ့ဟာတွေ၊
ဖက်မိုး ဆေးသုပ် ပန်းရန်လုပ်၊ ကျပန်းအလုပ်တွေမှာ အခြေကျလို့
လုပ်သက်ရင့်နေပါပြီ၊ ဘိလိယက်ခုံတွေ၊ တီဗွီဂိမ်းတွေ၊ ဆိုင်ဘာကဖေးတွေ
ဟုတ်ကဲ့ပါ၊ သရီးအင်ဝမ်းပေါ့၊ တရုတ်နဲ့ယိုးဒယားဖက်စပ်ပါ
ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့လွဲအောင် လက်ညှိုးထိုးပါ၊ ကိုးရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲမကြိုက်သူ
လက်ညှိုးထောင်ပါ၊ မြိတ်ကိုလက်ညှိုးထိုးရင် ကိုယ့်ဘက်ကို
တန်ခိုးကြီးဘုရားနဲ့ စေတီပုထိုးများပေါ်မှာ ခုနစ်ရက်သားသမီးများစည်ကားလို့
တရုတ်ဘုံကျောင်းမှာ စာချပြီး အသားတုဆွမ်းနဲ့အလှူပွဲ
ဘုရားကျောင်းမှာ နှစ်ခြင်းခံယူ ခရစ်တော်မှာ အိပ်ပျော်လို့
ကုလားအပ်စိုက်ပွဲ၊ ကုလားကျားအက၊ တရုတ်ခြင်္သေ့အက၊ မြန်မာနဂါးအက
ဘာလူမျိုးလဲ၊ ဘယ်သိင်္ချိုင်းသွားချင်သလဲ၊ ပိတ်ရက်မရှိ တစ်လမ်းတည်း
သင့်ကြောင့်အေ့စ်မလောင်ပါစေနဲ့၊ လိင်ဆက်ဆံလျှင် ဦးထုပ်ဆောင်းပါ၊
မေးသိုင်းကြိုးတတ်ပါ မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ခြင်းသည် ကုသခြင်းထက်
ထိရောက်သည်၊ ဆူနာမီတုပ်ကွေး ကြက်ငှက်ငလျင်၊ ဂြိုဟ်တုစလောင်းတွေက
ကိုယ့်ဖက်လှည့်လာပြီ၊ ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲလည်း နီးလာပြီဆိုတော့လေ
မှ နှုတ်ခွန်းဆက်သပါ၏။ ။
လူကြီးမင်းများ အသက်ပြည့်ဖို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။ ။
နာတာရှည်ရဲတိုက်။ ၂၀၀၂၊ နိုဝင်ဘာ။
Posted by Thi Ha Thu at 9:11 PM
Posted by Thi Ha Thu at 9:08 PM
Posted by Thi Ha Thu at 9:07 PM
အားလပ်ရက်များတွင် ရေအိုင်နံဘေး၌ သမားရိုးကျနေထိုင်ကြည့်ခြင်း
လက်ချောင်းတွေ တပွေ့တပိုက်၊ တစ်ခုပြီးတစ်ခုကွေး
နောက်တစ်ကြိမ်ချိုး၊ အကြိမ်ကြိမ်ကွေး၊ အကြိမ်ကြိမ်ချိုး
၂၀၀၈၊ အောက်တိုဘာ၊ နှစ်ကာလများ။
Posted by Thi Ha Thu at 9:03 PM
ဆူဆိုဒ်လုပ်နေတာမဟုတ်။ မဟုတ်။ လုံးဝမဟုတ်
လုံးဝ (လုံးလုံးဝဝ) မဟုတ်။
အရက်သောက်နေတာပါ။ အရက်သောက် နေတာ
အရက်ကိုသောက်နေတာ။ အရက်ကို ဒီလို
ရင်ဘတ်မြည်ဟီး စည်ကြီးတီး ဒီလို
တရစ်စိန်တရစ် မြတစ်ရစ် သိကြားတရစ်
ရုပ်လုံးပေါ်။ ခရစ်စတယ်ဘောစခ ရင်ထဲမှာ ပေါ်
‘ရှော’ ဘိုင့်ဘိုင်။ နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ကျန်ရစ်သူတွေ
တစ်ပတ် တစ်လ လွမ်းဖို့မောပန်းသွားပြီ။
အတိအကျ၊ ဟုတ်ရဲ့လားကွ သံဝေဂ
ငါတကယ်အိပ်ချင်နေပြီကွာဆိုတဲ့ စကားစုကို အားမနာတမ်း
အဲဒါခက်တယ်။ ဒီမှာအဲဒါ သိပ်ခက်တယ်
တကယ်အနားယူဖို့ လိုလာလို့ ငါ့ဘော်ဒီအတွင်းထဲက
Posted by Thi Ha Thu at 8:56 PM
ပကြိမ်၊ စိတ်ကူးချိုချို၊ သြဂုတ် ၂၀၀၈။
တန်ဖိုး ၁၀၀၀ကျပ်၊ စောင်ရေ ၅၀၀။
ငါတို့ဟာ (ဟန်ကိုယ့်ဖို့) သက်သာရာ ရခဲ့ကြ
Jan 06, Idea Magazine
Feb 06, Idea Magazine
ရိုက်ညီနောင် လေယာဉ်ပျံတီထွင်ဖြစ်တာ မှားတယ်
ဂူတင်ဘတ် ပုံနှိပ်စက်တီထွင်ဖြစ်တာ မှားတယ်
အက်ဒီဆင် မီးကိုတွေ့ရှိတာ မှားတယ်
အိုင်းစတိုင်း ဆဲငင်အားကို တွေ့တာမှားတယ်
March 06, Idea Magazine
Apr 06, Idea Magazine
May 06, Idea Magazine
ခွေးက မီးကွင်းထဲ ဒိုင်ဗင်ထိုး
လူက ခြင်္သေ့ပါးစပ်ထဲ ခေါင်းဝင်
June 06, Idea Magazine
စကားလုံးများကို ရွှေ့ကြည့်ကြ၏ ။
August 06, Idea Magazine
September 06, Idea Magazine
October 06, Idea Magazine
November 06, Idea Magazine
အိပ်ထဲကို လက်လျှိုလိုက်တော့ ဗလာ
ဘဝထဲကို ခေါင်းထိုးလိုက်တော့ ဗလာ
January 07, Idea Magazine
ကြွေတဲ့ပန်းသီးနဲ့ ငါနဲ့ ကမ္ဘာ
February 07, Idea magazine
ငါတို့ကိုယ် ငါတို့ ပို့ပြီးနောက်
March 07, Idea Magazine
ဒုံးပျံကြောင့် လူဆိုးတွေ ပိုမြန်လာခြင်း
လျှက်စစ်ကြောင့် လူဆိုးတွေ ပိုလင်းလာခြင်း
ဘုရားသခင် တီထွင်တဲ့လူကို ဝယ်လို့ရတဲ့
လူတီထွင်တဲ့ ပေါင်စတာလင် စက္ကူများ
April 07, Idea Magazine
May 07, Idea Magazine
June o7, Idea Magazine
ကျွန်တော်မတတ်နိုင်သော ကမ္ဘာလောကကြီးထဲသို့ ရောက်ခဲ့သည်။
ကျွန်တော် တတ်နိုင်သလောက် ကြိုးစားခဲ့မိသည်။
July 07, Idea Magazine
Posted by Thi Ha Thu at 12:04 PM
ပကြိမ်၊ စာအုပ်ဈေး၊ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၈။
တန်ဖိုး ၂၀၀၀ကျပ်၊ စောင်ရေ ၅၀၀။
ဤနေရာတွင် သုံးသပ်ချက်ဆောင်းပါးရှိ၏ ။
Posted by Thi Ha Thu at 4:13 PM
လေးတော်ကို ငါတင်ပြီး ပစ်ချလိုက်ရမှာက
Posted by Thi Ha Thu at 3:57 PM
ငါကိုယ်တိုင် မြှုံးမှာ မိမှပဲ၊
ဒါ ဘဝရဲ့ အဘိဓမ္မာပဲ
စက္ကူလေယာဉ်ပျံလေးကို လက်ထဲကလွှတ်ချလိုက်ပြီ။ ။
Posted by Thi Ha Thu at 3:49 PM
Posted by Thi Ha Thu at 3:03 PM
သွားတိုက်သံပေါ်မှာ လွဲချော်မှုကို တွေ့ရ
"နွား" ဆေးလိပ်တစ်လိပ်နဲ့ ခုခံထားရင်
အသက်ခွက်ထဲ ဘဝကို ရေခံကြည့်သောအခါ
* တို့နှလုံးသားတွေနဲ့သာ ထုဆစ်ခဲ့ကြတာပေါ့ကွယ်
(တို့နှလုံးသားတွေနဲ့သာ တို့ခေတ်ကို ထုဆစ်ခဲ့ကြတာပေါ့ကွယ်)
မမြဲတဲ့ အနိစ္စတရားက မြဲလွန်း
တို့တွေ ရှုံးလွန်းလှတယ်ကွယ်။ ။
Posted by Thi Ha Thu at 8:11 PM
ကျွန်တော် ကဗျာတိုလေးတွေကို ပိုကြိုက်ပါတယ်။ ဘလော့ဂ်မှာတင်ထားတာတွေမှာလည်း ကဗျာတိုတွေပိုများပါတယ်။ (စာရိုက်ရတာ နည်းလို့ :D ) ခု ကဗျာတိုနှစ်ပုဒ်ကို လမ်းညွှန်လိုက်ပါတယ်။ ဘလော့ဂ်မှာ ပြန် ကူးမတင်တော့ပါဘူး။
ကဗျာဆရာက မနော်ဟရီ ပါ။
Posted by Thi Ha Thu at 9:23 AM
ငါ့မှာဖြင့် ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ ငါ့ပေါင်မုန့်တွေ။
ဘယ်စုန်း ပြိတ္တာ တစ္ဆေမ ဖုတ်ဘီလူးမှ လာမလုဘူး
ငါ့ တူရာသီမှာ မီးလာလာတောက်တောက်နေတယ်
ငါ့ ကန်ရာသီမှာ ကြာတွေလာလာပေါက်နေတယ်
ငါ့ သိဟ်ရာသီမှာ ခြင်္သေ့လာလာဟောက်ဟောက်နေတယ်
ငါ့ပေါင်မုန့်တွေ ပျောက်ပြီးရင်း ပျောက်ပျောက်နေတော့ရဲ့။ ။
Posted by Thi Ha Thu at 12:41 AM
မင်းမုန်းတဲ့နေ့ဟာ ငါအမှန်တရားကို တွေ့တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်
အင်မတန် ပူနွေးလှတဲ့ သူ့လက်ကြီးနဲ့
ပန်းသီး ချယ်ရီပန်းနဲ့ ရွှေရောင်ကလောင်တန်တစ်ချောင်း
ငါ့အမှန်တရားဝတ်စုံကို ဝတ်ဆင်ကာ။ ။
Posted by Thi Ha Thu at 12:30 AM
ငါဟာ သဲကန္တာရထဲက ပုရောဟိတ်ဆရာလို
၂၇၊ ဇွန်၊ ၁၉၆၀
Sylvia Plath (1932-1963) ရေး The Hanging Man ကို ဇေယျာလင်းမြန်မာပြန်သည်။
(အညှီနံက နောက်ကားပါလာတာကို သိတယ်)
သစ်သားဘတ်(စ်)ကားကြီးထဲ ထည့်ပြီး ခလောက်တော့
ဒါပေမယ့် သတ္တိရှိတဲ့ခြုံပုတ်ကလေး...။ ။
ကျီးကန်းနဲ့ ဘိုဟီးမီယန်းများ ကဗျာစာအုပ်။
Posted by Thi Ha Thu at 9:02 PM
သူ့အသံက ဖမ်းဆုတ်ရခက်တဲ့ ပြဒါး
အနက်ရောင် အဝတ်စတစ်စ။ ။
ကျီးကန်းနဲ့ ဘိုဟီးမီးယန်းများ ကဗျာစာအုပ်။
ကျုပ်အမေနဲ့ အဖေ သတိရ
နေရောင်အောက်က ကဗျာများ ကဗျာစာအုပ်။
Posted by Thi Ha Thu at 12:06 PM
ငယ်က အလှ ကျွန်မကိုယ်လည်း
စောင့်ရင်း မျှော်ရင်း အိုခဲ့တယ်။
ငါ့ကို တ သ နေမယ်ဆိုရင်
ကျမကို မေ့မယ်ဆိုလည်း မေ့ပါစေ၊
လွမ်းသလို ဆွေးသလို စိတ်နွမ်းလို့
ဟိုမည်းမည်း ဒီမည်းမည်းနဲ့ ပိုလို့သာ စိတ်ဆင်းရဲ။
ရှင်နေလည်း ချစ်ဒုက္ခ မြင့်သထက်မြင့်
သိပ် သိပ် ကျေနပ်တယ်၊
ဆင်းရဲလှတဲ့ ငါ၊ ဘုန်းကြီးဆိုပေမယ့်
ဒေါက်တာ သန်းထွန်း (မြန်မာပြန်)
Labels: ဒေါက်တာ သန်းထွန်း
မိုးရွာတော့မယ် သူငယ်ချင်းတို့။ ။
ပုံပြောသူ ကဗျာစာအုပ်၊ စာ ၃၁။
Posted by Thi Ha Thu at 9:33 AM
အဟောင်းပဲ တလည်လည်။ ။
မေ့ နေ ခဲ့ တယ် . . .။ ။
(ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်ရေးထားတာကိုလည်း ရောပြီးတင်လိုက်ပါတယ်။)
Posted by Thi Ha Thu at 10:36 PM
အညာကျေးက ကဗျာတေး ကဗျာစာအုပ်၊ စာ ၅
Posted by Thi Ha Thu at 4:50 PM
မင်းရင်ခုန်သံကို လုံအောင် ဖုံးပေးပိုင်ခွင့်လည်း မရှိတော့
သူ့ကို မင်းမချစ်ဘဲနဲ့ မင်းကို သူဘာလို့ သိမ်းပိုက်ခဲ့တာလဲ
မင်းနဲ့ငါ ချစ်လျက်နဲ့ ငါတို့ ဘာလို့ ဝေးကွာခဲ့တာလဲ
ရှုမဆုံးတဲ့ အလွမ်းတွေ ငါမွေးရင်း
လျှောက်ခဲ့ရတဲ့ ငရဲကို။ ။
မိုဃ်းဇော်သေတမ်းစာ ကဗျာစာအုပ်၊ စာ ၇၄
Posted by Thi Ha Thu at 4:35 PM
ဒိုင်ယာရီ မရေးတာ ကောင်းပါတယ်။
နတ်မကြိုက်တဲ့ ပါးစပ်နဲ့ အချစ်ကို ဓာတ်စာပေးကြည့်ဖူး
ပိုက်ဆံမရှိတဲ့လက်နဲ့ မြို့ကြီးကို ကျောသပ်ရင်သပ်လုပ်ကြည့်ဖူး
ငါးခုံးမ တစ်ကောင်လိုလည်း ကင်ဖူးတယ်။
ငါ့ကို စက္ကန့်လက်တံလို သဘောထားပါ
ပြာပုံထဲ အပျင်းကြောဆန့်ချင်တဲ့ ကောင်ပါ။
ဘဝကို ခေါစာပစ်ချေအံ။ ။
မိုဃ်းဇော်သေတမ်းစာ ကဗျာစာအုပ်၊ စာ ၇၀
Posted by Thi Ha Thu at 4:22 PM
Posted by Thi Ha Thu at 4:18 PM
ဒါဟာ ဘုရားမကြိုက်တဲ့ ကိစ္စပါလို့ မင်းကမပြော
ဒါဟာ ရှောင်လွှဲမရနိုင်တဲ့ သဘာဝတရားကြီးပါလို့ ငါကမဆို
ကမ္ဘာထဲက ကန်ထုတ်ကြပြန်ရော။ ။
မိုဃ်းဇော်သေတမ်းစာ ကဗျာစာအုပ်၊ စာ ၄၉
ရုပ်ရှင်တေးကဗျာ မဂ္ဂဇင်း၊ ၉၆
အကြိမ်ကြိမ် လျှောကျ ပျက်စီး။
တစ်ပင်တည်း တစ်ကိုင်းစီ လွဲခဲ့ရသော
အမှတ် ၉၊ ပိတောက်ပွင့်သစ်မဂ္ဂဇင်း၊ ၀၆
Posted by Thi Ha Thu at 9:05 PM
ငှက် ၁၀၀၀၀ အိမ်
အမှတ် ၂၊ ပိတောက်ပွင့်သစ်မဂ္ဂဇင်း၊ ၀၆
Posted by Thi Ha Thu at 8:57 PM
စပိန်ဂီတနဲ့ မွှေးမြနေတဲ့ညတွေကို ကိုက်ချီသွား
ဒီဇင်ဘာ၊ Beauty Max မဂ္ဂဇင်း၊ ၀၇
အင်္ကျီတံဆိပ်များ ကဗျာစာအုပ်၊ ဇန်နဝါရီ၊၂၀၀၉
Posted by Thi Ha Thu at 5:43 PM
အင်္ကျီတံဆိပ်များ ကဗျာစာအုပ်၊ ဇန်နဝါရီ၊ ၂၀၀၉
Posted by Thi Ha Thu at 5:39 PM
သစ်ရွက်အဝါအို နီ ရွှေ အချို့
အို... သစ်ကိုင်းမျက်ရည်စို့။ ။
ဒီဇင်ဘာ၊ မဟေသီ မဂ္ဂဇင်း၊ ၀၈
Posted by Thi Ha Thu at 5:34 PM
သူ့ကိုယ်ပိုင် အသက်ရှင်ချိန်က ရှားတယ်...
နိုဝင်ဘာ၊ Beauty မဂ္ဂဇင်း၊ ၀၈
Posted by Thi Ha Thu at 4:57 PM
စာ ခို ကျီးကန်း ပျံကျသမား
တီကောင် လယ်ထွန်စား။ ။
အမှတ် ၈၊ စာပေဂျာနယ်၊ ၁၉၈၉
အောက်တိုဘာ၊ မဟေသီမဂ္ဂဇင်း၊ ၀၈
တားမြစ်ထားတဲ့ သစ်သီးကို စားမိတယ်
တားမြစ်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ကို ကြည့်မိတယ်
တားမြစ်ထားတဲ့ အိပ်မက်တွေ တစ်ညလုံးမက်ခဲ့
Posted by Thi Ha Thu at 4:39 PM
စစ်လွန်းလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ရေရောလိုက်ရ
ဘာမှ မပြည့်စုံခြင်းက ပြည့်စုံပါတယ်ဆိုရင်
ဇူလိုင်၊ Beauty မဂ္ဂဇင်း၊ ၀၈
Posted by Thi Ha Thu at 4:34 PM
စုပေါင်းမောင်နှမ ၉ယောက် ၁ယောက်ပိုလီယို
Posted by Thi Ha Thu at 4:25 PM
ပုံပြောသူ ကဗျာစာအုပ်၊ စာ ၂၅
Posted by Thi Ha Thu at 2:58 PM
ပုံပြောသူ ကဗျာစာအုပ်၊ စာ ၁၁
Posted by Thi Ha Thu at 2:56 PM
၁။ တုတ်ကောက်တစ်ချောင်း (အမြဲတမ်းအတွက်)
၃။ စိပ်ပုတီး (တစ်ခါတစ်ရံအတွက်)
၄။ ကြောင်ပိန်ပိန်ကလေး (သူစားမကုန်တာ ကျွေးဖို့)
၆။ မြင်းရိုင်းတစ်ကောင် (စိတ်ကူးထဲမှာ စီးကြည့်ဖို့)
ကဗျာဆရာဝံပုလွေ ကဗျာစာအုပ်၊ စာ ၅၂
Posted by Thi Ha Thu at 2:43 PM
အေး - ဒါပေမယ့် လူဖြစ်ရတာကောင်းတယ်
တစ်ခါတစ်လေ ဘဝင်နည်းနည်းမြင့်၊ တစ်ခါတစ်လေ အရှက်ရ
တစ်ခါတစ်လေ ဆွေး၊ တစ်ခါတစ်လေ သတိရ၊ တစ်ခါတစ်လေ ပျော်ရွှင်
တချို့အဘိဓမ္မာတွေ ငါမကြိုက်ဘူး၊ တချို့မိတ်ဆွေတွေ ငါမကြိုက်ဘူး
ယဉ်ကျေးပါ၊ သင်ယူပါ၊ ရိုးဖြောင့်ပါ
ငါပိုသိလာတဲ့အချိန်မှာ ငါဟာ ဝံပုလွေတစ်ကောင်ဖြစ်နေခဲ့ပြီကွဲ့။
ကဗျာဆရာဝံပုလွေ ကဗျာစာအုပ်၊ စာ ၅၀)
Posted by Thi Ha Thu at 2:30 PM
အားလပ်ရက်များတွင် ရေအိုင်နံဘေး၌ သမားရိုးကျနေထိုင်ြ...
မင်းမုန်းတဲ့နေ့ဟာ ငါအမှန်တရားကို တွေ့တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်...